5 Ny ankamaroan'ny tahiry voajanahary tsy hay hadinoina any Eropa | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Switzerland > 5 Ny ankamaroan'ny tahiry voajanahary tsy hay hadinoina any Eropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 24/10/2020)
Tendrombohitra mahatalanjona, lohasaha mamelana, riandrano, farihy, sy ny biby dia, Tranon'i Eoropa amin'ireo tahirin-javaboary tsy hay hadinoina indrindra eto an-tany. Mandany ny tany maitso midadasika izay maniry eo amin'ny lohataona, 5 amin'ireo valan-javaboary tsara tarehy indrindra any Eropa dia valan-javaboary arovana izay mandray ireo mpandeha manerana an'izao tontolo izao. Raha mazoto mitsangatsangana ianao, Trekking, na mankafy ny fitoerana masina, dia ho tianao ny anay 5 tahiry voajanahary tsy hay hadinoina indrindra tany Eropa.
1. Fiarovana natiora Belluno Dolomite any Italia
Ny tahiry voajanahary Belluno dia natsangana tao 1990 hiarovana ny natiora tsara tarehy an'ny Dolomites. Any amin'ny sisin'ny Dolomite ao amin'ny faritra avaratr'i Italia, Ny zaridainan'ny natiora Belluno dia mahavariana amin'ny lohataona. Ireo havoana maitso sy tampon-tendrombohitra mahavariana dia rakotry ny karipetra voninkazo. Na manao ahoana na manao ahoana ny tanjaky ny vatanao, hanana fotoana mahafinaritra ianao amin'ny fikarohana ity fitahirizana natiora ity, satria misy lalana isan-karazany. Ny fitehirizan-tany natoron'i Belluno any Eropa dia mety ho an'ny mpandeha an-tany sy ny mpandehandeha efa za-draharaha.
32000 hektara tampon'ny voninkazo sy vatosokay tsy fahita firy, ny tahiry voajanahary an'i Belluno dia mipaka hatrany amin'ny lohasaha Cismon ka hatrany amin'ny lohasaha Piave. Ny fahasamihafana manankarena dia eo amin'ny fiompiana sy ny kolontsaina noho ireo tanàna maro ao amin'ny faritry ny lohasahan'ny Piave. Noho izany rehefa mitsidika ny tahiry natiora Belluno any Eropa ianao, azonao atao ny manana dia mahafinaritra hijerena zava-mahatalanjona voajanahary sy vatosoa ara-kolontsaina.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny Reserve Reserve voajanahary Belluno?
Ny tahiry voajanahary Belluno dia kely noho ny 3 dia an-dalamby an-tongotra avy any Venise.
Aiza no mety hijanonako manodidina an'i Belluno Park?
Betsaka ny trano bongo any an-tendrombohitra, B&B, sy trano fandraisam-bahiny.
Andro firy no tokony holaniako ao amin'ny Reserve Reserve an'ny natiora Belluno?
Ny tahiry Belluno Dolomites dia iray amin'ireo lehibe indrindra ary 5 ny ankamaroan'ny tahiry voajanahary tsy hay hadinoina any Eropa. koa, Belluno dia valan-javaboary tsara tarehy, ka tokony handany farafaharatsiny 3 andro hijerena sy hankafizana ny lagoons, tendrombohitra, ary famirapiratana voajanahary.
2. Hohe Tauern Nature Reserve any Austria
Ny tahiry voajanahary lehibe indrindra ao amin'ny Alpes Eoropeana dia any Austria. Ny tahiry Hohe Tauern no misy ny trano 10,000 karazam-biby, 1,800 zavamaniry, ary ny Grossglockner, Tampon’isa ambony indrindra any Aotrisy, amin'ny 4,798 metatra ambonin'ny ranomasina. Ity tendrony miavaka ity dia mitoetra eo afovoany 200 tampon-tampon'ny hafa, biby maitso, tendrombohitra farihy, sy riandrano.
Ny lohasahan'ny valan-javaboahary Hohe Tauern dia feno hodi-kazo mahatalanjona, taloha sy fahitana an-tanàna mahafinaritra, karipetra voninkazo, sy ala. Ity valan-javaboary natiora eropeana ity dia toeram-pialofana ho an'ireo mpitsidika sy mponina tsara vintana amin'ny faritra manodidina. Manokana, Làlan'ny natiora sy renirano Umbalfalle, izay hahitanao ny sasany amin'ireo riandrano mahavariana indrindra any Eoropa.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny tahiry voajanahary Hohe Tauern?
Ny valan-javaboary Hohe Tauern dia akaikin'ny tanànan'i Mallnitz. Vienna mankany Hohe Tauern amin'ny lamasinina dia manodidina 5 ora.
Aiza no azoko hijanonana manodidina ny valan-javaboary Hohe Tauern?
Mallnitz dia tanàna iray malaza ao amin'ny Hohe Tauern miaraka amina safidy maro.
Andro firy no tokony holaniako ao amin'ny Hohe Tauern?
Misy maro isan-karazany làlana fitsangantsanganana any Hohe Tauern tahiry voajanahary, ka manomana a 4-5 andro 'dia tsara indrindra. Amin'izany no ahafahanao mizaha ny valan-javaboary sy ny tanàna akaikin'ny tanàna.
3. Ecrins Nature Reserve any Frantsa
Rehefa mitsangatsangana amin'ity ala voajanahary mahatalanjona ity ianao amin'ny Alps French, aza hadino ny mijery ny voromahery, stoats, willow grouse, sy ny bibidia maro hafa izay miantso azy an-trano. Ity tahiry mahavariana ao amin'ny Alpes Eoropeana ity dia iray amin'ireo tsara tarehy valan-javaboary hanana ny fotoana hahitana ianao.
vongan-dranomandry, tendrombohitra avo, tany maitso alpine, ary rivotra madio, Hisarika ny fanahinao ny fahitana sy ny tontolon'ny ecrins.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny Reserve Reserve Ecrins?
Afaka mahatratra ny valan-javaboary Ecrins ianao na aiza na aiza faritra any Frantsa. Ny valan-javaboary dia eo akaikin'ny sisin-tany frantsay miaraka amin'i Italia. Manakaiky an'i Lyon izy io, Marseilles, ary Genève any Suisse, Ka ny fitsangatsanganana an-dalamby manerana an'i Frantsa mankany Ecrins dia safidy lehibe.
Aiza no mety hijanonako manodidina ny park Ecrins?
Manomboka amin'ny trano fandraisam-bahiny ankafizin'ny fianakaviana ka hatramin'ny hofan-trano fialan-tsasatra, misy fahasamihafana isam-ponenana safidy manodidina ny tahiry natiora Ecrins.
Andro firy no tokony andaniako vola amin'ny ecrins?
Miankina aminao. Na manapa-kevitra ny hanokana ho an'ny 7 andro na mandeha fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro, hanana dia lavitra nofinofy ianao.
4. Alemanina voajanahary Alemana Sachon Ary Bohemian Switzerland any amin'ny Repoblika Czech
Ny zaridaina zaridaina kanto sankesisy dia manomboka hatrany Alemana ka hatrany amin'ny Repoblika Tseky. Tendrombohitra vatosokay elbe sy ny vatolampy Pravcicka brana malaza malaza eran-tany dia efa nanasongadina ny “Liona, ny mpamosavy, sy ny Sarimihetsika ”. Ity tahiry voajanahary manaitra ity dia iray amin'ireo tahirin-java-boahary tsy hay hadinoina indrindra tany Eropa izay misy fomba fijery mpinamana Instagram maro eny an-tampon'ny lohasaha.
Fahavaratra na ririnina, ny lalana maitso, ary ny dian-tongotra dia voamariky tsara sy mora manavaka ireo zavamaniry maitso manamorona ny lafiny roa amin'ilay lohasaha sy ny renirano. Alemanina Alemana, na Bohemian Switzerland, miankina amin'ny dia nataonao na toerana nalehanao tany am-boalohany, izay paradisa oasis sy fitsangantsanganana mahafinaritra ho an'ny mpandeha eran'izao tontolo izao.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny sisintany alemà sankona na bohemia Switzerland?
Afaka mankany amin'ity tahiry voajanahary mahavariana ity ianao Eropa amin'ny dia an-tongotra avy any Prague na Dresden.
Aiza no mety hijanonako manodidina ny valan-javaboary?
Satria ny fitehirizan-javaboary dia eo amin'ny sisintanin'i Alemana sy ny Repoblika Tseky, ny safidy honenana dia tsy misy farany.
Andro firy no tokony handaniako any Bohemian Switzerland?
Ny fitsangatsanganana antoandro dia tsy maintsy atao tanteraka, ary raha afaka mandany andro vitsivitsy ianao, avy eo tena atoro anao fatratra.
5. Ordesa sy Monte Perdido Reserve Reserve any Frantsa
Any afovoany eo anelanelan'ny Espana sy Frantsa no misy azy, Ordesa sy Mount Perdido dia iray amin'ireo tahiry voajanahary mahavariana indrindra any Eropa. Na dia miorina amin'ny ilany frantsay miaraka amin'ny tampon'ny 3,355 M. ny anarana tandavan-tendrombohitra Monte Perdido dia nahazo ny anarany satria tsy tazana avy amin'ny lafin'ny frantsay ny sisin-tany.
Spectacular Ordesa dia samy a UNESCO vakoka manerantany amin'ny Eropa ary tahirin-javaboary iray an'ny biby dia. Ao no misy ny lohasaha Ordesa, riandrano, bibidia isan-karazany, anisan'izany ny voromahery volamena, ary 32 karazana biby mampinono. Rehefa mitsangatsangana sy mankafy ny fomba fijerin'ny tandavan-tendrombohitra Pyrenees ianao, aza hadino ny mijery an'i Marmots, Hawks, vorondolo, ihany koa. Ary noho izany, Ny valan-javaboary Ordesa sy Monte Perdido dia fitoerana masina mahatalanjona ary toeran'i Eropa ho an'ny karazana mpandeha rehetra.
From 3 ora ’to 2 dia fitsangatsanganana an-tongotra andro, Ordesa dia manolotra làlana fitsangatsangana isan-karazany, ho an'ny ambaratonga fitoviana samihafa.
Ahoana no fomba ahatongavana any amin'ny Reserve Reserve voajanahary Ordesa?
Ny tahiry Ordesa sy Monte Perdido dia azo zahana avy any Frantsa sy Espana. Avy eo Zaragosa ka hatrany Torla-Ordesa dia momba izany 5 ora na 3 ora maro avy any Barcelona. Raha mandeha any Frantsa ianao, avy eo Toulouse dia 7 ora maro.
Aiza no mety hijanonako manodidina ny Ordesa Park?
Afaka mahita safidy fampiantranoana tsara ao Torla ianao, avy amin'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely.
Andro firy no tokony handaniako ny ao amin'ny Ordesa Nature Reserve?
Ordesa sy Mount Perdido dia fantatra ihany koa amin'ny valan-javaboary Yosemite any Eropa. Ary noho izany, tokony hijanona farafaharatsiny ianao 3 andro, anisan'izany ny fitsangatsanganana sy ny fotoana fialan-tsasatra.
5 amin'ireo tahirin-java-boahary tsy hay hadinoina indrindra any Eropa dia manolotra fomba fijery epik sy làlana fitsangantsanganana amin'ireo riandrano mahavariana eran'izao tontolo izao. Ary noho izany, mitsangatsangana amin'ireo lohasaha maitso, Ny fiderana ny tanimboly sy ny tampon'ny tendrombohitra no fanomezana lehibe indrindra azonao omena ny tenanao. Tsy misy zavatra miala sasatra sy manentana kokoa noho ny natiora any amin'ireo firenena mahavariana indrindra any Eropa.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina ny fialan-tsasatrao any amin'ny tahiry voajanahary nofidinao tamin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Fiarovana voajanahary 5 tsy hay hadinoina indrindra any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-na...-reserves-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ja ny / en na / de kokoa fiteny.